UMugabe kumele asike iphethini kuZuma 'otshengise ukuba ngumholi oqotho' | News24
UMugabe kumele asike iphethini kuZuma 'otshengise ukuba ngumholi oqotho'
Harare - URobert Mugabe kumele asike iphethini kulowo obengumengameli waseNingizimu Afrika uJacob Zuma atshengise ukuba "ngumholi oqotho" ngokungabambi magqubu ngokukhishwa kwakhe emandleni, kusho umbiko wephephandaba elingaphansi kukahulumeni ngoLwesibili.
Abahlaziyi batshele iHerald ukuthi yize uZuma etshengise "ukubonga" ngethuba alinikeziwe lokuhola abantu, uMugabe utshengisa ukuthi "nguye kuphela ofanelwe wukuphatha".
"UZuma wakhishwa emandleni futhi uyaziqonda izizathu zalokho, kepha thina la sinenkinga yomholi ozicabangela yena yedwa okholelwa ekutheni yonke into ethinta iZanu-PF neZimbabwe ngeyakhe nomndeni wakhe," kusho umhlaziyi uGoodwine Mureriwa.
"Into eyenziwe nguZuma kumele ivuse uMugabe emaqandeni," esho, wananela ngokuncoma isinqumo sikaZuma sokukhakhasela i-ANC KwaZulu-Natal yize aketulwa ngenyanga eyedlule.
UMugabe usethole ukugxekwa kaningana ngokweseka iqembu lamahlubuka, iNational Patriotic Front, eholwa yilowo owayengungqongqoshe kwiKhabhinethi lakhe.
OLUNYE UDABA: UZuma uyamzonda uMugabe - Malema
Lo mholi, 94, usolwa ngokuzama ukuhlakaza iZanu-PF ngenhloso yokuziphindiselela ngokukhishwa kwakhe emandleni ngoNovemba nyakenye.
I-NPF, eyesekwa nayiqeqebana leqembu elibusayo elalihambisana noGrace Mugabe, kulindeleke ukuba lingenele ukhetho ngasekupheleni kwalo nyaka.
Umhlaziyi uTafadzwa Mugwadi uchaze uMugabe "njengeqhawe eseliphenduke isitha".
"Abantu baseZimbabwe babekezela ephethe iminyaka engu-37 kodwa yena usekhathele ngemuva kwezinyanga ezintathu nje vo," kusho uMugwadi.
"Kumele abukele kuZuma ngoba iZanu-PF yameseka ngayo yonke indlela uMugabe esaphethe."